अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका ज्वाइँ गौरवराज ढकाललाई सरकारी नियुक्ती : परिषदको उपाध्यक्ष ! | Diyopost
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका ज्वाइँ गौरवराज ढकाललाई सरकारी नियुक्ती : परिषदको उपाध्यक्ष !
काठमाडौं, १७ चैत्र । बालुवाटार जग्गा प्रकरणका सबैभन्दा चर्चित र विवादित पात्र हुन्–अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । सेटिङमा जग्गा मिलाएबापत उपहार स्वरुप ८ आना जग्गा पाउने भाग्यमानि पौडेललाई कुनै पनि निकायले छानबीन समेत गरेन ।
अख्तियारले पूर्वउपप्रधान मन्त्री विजय कुमार गच्छदारलाई मुद्दा चलाएपनि पौडेलसहितका ठूला माछालाई अभियोजन समेत गर्न सकेन । यता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को विरोध गरेकै आधारमा निलम्बन सहित बालुवाटार जग्गाकाण्डको मुद्दा समेत खेप्न परेको छ ।
तर, जग्गा नै आफ्ना छोराको नाममा हत्याउने अर्थमन्त्री पौडेलका आफन्त र नाता गोतालाई भने सरकारले नियुक्ती दिएर प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
पौडेलका ज्वाइँ डाक्टर गौरवराज ढकाललाई मन्त्रिपरिषदले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको खुलाशा भएको छ । वहिबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ढकाल अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालको साख्य ज्वाइँ हुन् ।
अध्यक्षमा भने डा. गेहनाथ बराललाई नियुक्त गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री हृदयस त्रिपाठीको सिफारिसको आधारमा ढकाल बराल लगायतका सदस्यहरु नियुक्त भएका हुन् ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषदले डा बन्दना खनाल, डा अवधेश तिवारी, डा सन्तोष शाक्य र डा रामआधार यादवलाई सदस्य नियुक्त गरेको छ।
ढकालको नियुक्तलाई लिएर नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।